DanAds: Teknolojiyada Xayeysiinta Is-Adeeg ee loogu talagalay Daabacayaasha | Martech Zone
Jimce, Maarso 5, 2021 Jimce, Maarso 5, 2021 Peon Persson
Xayeysiinta barnaamijyada (otomatiga wax iibsiga iyo iibinta xayeysiinta internetka) ayaa cunno u aheyd suuqgeyaasha casriga ah sanado badan waana sahlan tahay in la arko sababta. Awoodda ay u leeyihiin iibsadayaasha warbaahinta inay adeegsadaan softiweer si ay u iibsadaan xayeysiinta ayaa wax ka bedeshay booska xayeysiinta dhijitaalka ah, iyadoo meesha ka saartay baahida loo qabo hannaan dhaqameedka gacanta sida codsiyada soo jeedinta, hindisooyinka, xigashooyinka, iyo, gaar ahaan, gorgortanka aadanaha.
Xayeysiinta barnaamij-dhaqameedka, ama xayeysiinta barnaamijyada adeegga maareynta sida mararka qaar loo tixraaco, ayaa u oggolaatay xayeysiiyayaashu inay qaataan a deji oo illoobo dabeecad. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay keenayso heer cusub oo fudayd iyo otomaatig ah oo loogu talagalay shirkadaha nooc kasta oo ay yihiin oo doonaya inay xayaysiiyaan ganacsiyadooda, haddana waxaa sidoo kale si joogto ah loogu dhalleeceeyaa la'aanta daahfurnaanteeda. Iyada oo la adeegsanayo xayeysiinta barnaamijyada adeegga la maareeyay, qayb badan oo dakhli ah oo uu sameeyo daabacaha ayaa badiyaa ku dhammaata in loo diro dhexdhexaadiyeyaasha silsiladda wax soo saarka, sida wakaaladaha warbaahinta saddexaad iyo miisaska ganacsiga, oo aan daabacaddu wax lug ah ku lahayn. Xakamayn la'aanta iyo daahfurnaan la'aanta ayaa ku abuureysa waxqabad la'aan silsiladda wax soo saarka waxayna si weyn u wiiqaysaa awoodda wax iibsiga ee xayeysiiyaha iyo sidoo kale faa'iidada daabacaha.
Marka laga eego aragtida xayeysiiyaha, moodeelka barnaamijku guud ahaan waa ka roon yahay maxaa yeelay uma oggolaanayo ganacsiyada inay ogaadaan hubaal halka ay ku dambeyn doonaan xayeysiintooda, ama nooca ay ka kooban tahay ee lagu soo bandhigi doono agtooda. Tani waxay kicisay dood aad u kacsan oo ku saabsan amniga sumcadda gudaheeda xayeysiinta dhijitaalka ah sanadkii la soo dhaafay, aragtida guudna waxay tahay inay tahay nidaam deegaan oo cilladaysan oo u baahan in la beddelo si loo sugo mustaqbal waara ee xayeysiinta internetka.
Tani waa halka ay iskaa-u-adeeggu ku yimaado iyadoo hoos loo dhigayo kharashka loogu talagalay daabacayaasha iyo furitaanka adduunka ee xayeysiinta dhijitaalka ah ee ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, iyadoo la hubinayo xitaa miisaaniyadda ugu yar ee miisaaniyadda xayeysiiska ah inay faa'iido u leedahay daabacaha - dhammaantoodna waxay ku jiraan sumad-aamin deegaanka.
DanAds: Hesho Qayb Aad u Weyn oo Dakhliga Xayeysiiska ah isla markaana Dimuqraadiyeynta Booska Iswada
DanAds waxay bixisaa xalka xayeysiinta is-adeegsiga ee calaamadeysan ee cad-cad iyo la-habeyn karo, taas oo, ka duwan xalalka adeegga la maareeyay, waxay u oggolaanaysaa xayeysiiyayaashu inay si toos ah oo aan xadidnayn u helaan ololahooda. Tan macnaheedu waa daabiciyeyaashu waxay si buuxda gacanta ugu siin karaan qofka amarka bixinaya, iyaga oo awood u siinaya inay dhisaan xayeysiisyadooda, dejiyaan miisaaniyaddooda ololehooda, kormeeraan natiijooyinka 24/7, iyo inay ku hagaajiyaan waxyaabaha ku jira hal shaashad internetka ah.
DanAds wuxuu la shaqeeyaa daabacadaha dhaqameed sida Hearst Magazines iyo Bloomberg Media Group si loogu daro qiimo heer kasta oo habka iibsiga xayeysiinta ah. Tan waxaa lagu gaarayaa iyadoo la abuurayo xariiq toos ah oo udhaxeeya daabacaha iyo xayeysiiyaha, taasoo ka dhigeysa mid si buuxda u hufan, xalka hal-joogsi ah oo awood u siinaya otomaatiga dhammaan howlaha xayeysiiska, iibinta, iyo maareynta hantida hal abuurka leh Waxay sidoo kale hubisaa in daabacayaashu ay ka helaan qayb weyn oo ka mid ah dakhliga xayeysiinta marka loo eego sida ay uga heli jireen iibsashada xayeysiiska adeegga ee aan daah-furneyn. Taa baddalkeeda, tani waxay sii deyneysaa iibka daabacayaasha, AdOps, xisaabaadka, iyo kooxaha maaraynta si ay diiradda u saaraan howlaha muhiimka ah ee muhiimka ah iyo qiimeynta ee saameeya khadka hoose.
DanAds kuma koobna oo kaliya daabacaadda dhaqameed iyo daabacaadaha dhijitaalka ah, hase yeeshee. DanAds sidoo kale waxay lashaqeeysaa qaar kamid ah barnaamijyada UGC ee ugu waawayn (isticmaalaha laga helo) sida Tripadvisor, SoundCloud iyo Roku, taasoo u saamaxaysa ganacsiyada inay ku shaqeeyaan ololeyaal xayeysiis is-adeegsi ah oo ku saabsan fiidiyowyada, raadiyaha, iyo, isdhexgalka dhawaanahan Cayaaraha, baraha bulshada, sidoo kale.
Daraasadda Xaaladda - Maareeyaha Warbaahinta ee Tripadvisor:
Tusaalaha ugu wanaagsan ee halka tikniyoolajiyadda is-adeegsiga ee DanAds ay ku guuleysatay inay ku darto qiimo xayeysiistayaasha waxaa leh Tripadvisor, oo ah barxadda ugu weyn adduunka ee safarka, oo daahfurtay Maareeyaha Warbaahinta ee Tripadvisor ku shaqeeya DanAds ee 2019.
Tripadvisor wuxuu leeyahay faa iidooyin iib ah oo fara badan xayeysiistayaasha. Si kastaba ha noqotee, soo-jeedinta qiimaha ugu weyn ee lagu daray waxay ku xiran tahay awooddeeda xayeysiistayaasha in lagu arko macaamiisha hortooda inta ay ku guda jiraan qorsheynta iyo iibsashada safarkooda websaydhka. Natiija ahaan, barnaamijkeeda is-adeegsiga waxaa loo dhisay inuu ka tarjumo tan.
DanAds waxay awood u yeelatay inay dhisto barxad is-adeegsi ah oo maskaxeed iyada oo maskaxda lagu hayo bartilmaameed, awoodna u siineysa xayeysiiyayaasha inay bartilmaameedsadaan, oo ay dib u habeyn ku sameeyaan dhagaystayaasha 'Tripadvisor' halka ay u socdaan, qiyamka habdhaqanka, ama waddamada, wax gebi ahaanba u gaar ah barxadda. Iyada oo tan laga dhigayo qayb weyn oo muuqaal ah oo ka mid ah barxadda, iyo muuqaal muuqda horaantii hawsha ballansashada, waxay gacan ka geysatey xoojinta soo jeedintan qiimaha ee xayeysiistaha ah waxayna u suurtagelisay inay hirgeliyaan oo ay socodsiiyaan ololeyaal wax ku ool ah oo si gaar ah loogu bartilmaameedsanayo dhagaystayaasha gaarka ah ee Tripadvisor.
Sida loo isticmaalo Maareeyaha Warbaahinta ee Tripadvisor
Create an account - Markay xayeysiiyayaashu iska diiwaangelinayaan Maareeyaha Warbaahinta ee Tripadvisor, waxaa la siiyaa ikhtiyaarka ah inay iska diiwaangeliyaan xayeysiis toos ah (ganacsi ama shaqsi) ama wakaalad ahaan (xayeysiistayaasha oo ololahooda u gudbiya dhinac saddexaad).
Bilow Olole - Marka koonto la sameeyo, xayeysiiyeyaasha ama wakaaladaha ayaa markaa dejin kara oo xakamayn kara jadwalka ololaha, miisaaniyadaha, iyo bartilmaameedyada, kuwaas oo noqon kara mid ballaadhan ama mid adag oo ku xidhan doorbidka isticmaalaha. Bartilmaameedyada waxaa lagu dooran karaa iyadoo lagu saleynayo nooca safarka, nambarka sirta, magaalada ama gobolka, ama jinsiga, da'da, ama xiisaha (ku saleysan ereyada muhiimka ah).
Dhis iyo / ama Soo rar Hantida Hal-abuurka ah - Halkan, isticmaaleyaashu waxay ku soo rogi karaan hantida hal-abuurka ah ee jira, ama waxay si toos ah ugu dhisi karaan bartooda iyagoo adeegsanaya aalado macquul ah oo fududeynaya qaabeynta xayeysiinta cajiibka ah.
Soo rar Hantida Hal-abuurka ah
Dhis Hantidaada Hal-abuurka ah
Xulo habka lacag bixinta oo soo gudbi - Mar haddii isticmaaluhu ku faraxsan yahay ololaha, waxaa la siiyaa ikhtiyaar ay ku doortaan miisaaniyad oo ay ku doortaan ololaha bilowga iyo dhammaadka ololaha. Lacag bixinta waa aamin oo waxaa lagu sameyn karaa kaarka amaahda ama kaarka bangiga, ama qaansheegad. Ololayaasha waxaa lagala socon karaa iyada oo loo marayo muraayada gorfaynta waxaana isbedel lagu samayn karaa wakhti kasta si loo hagaajiyo waxqabadka isla markaana lagu gaaro ujeedooyinka xayeysiinta.
Nidaamka ballaarinta hufan ee DanAds wuxuu u saamaxayaa ganacsiyada, yar iyo weyn, inay abuuraan ololeyaal xayeysiis macno leh oo bartilmaameed ah, iyagoo faham buuxa ka haysta halka ay lacagtoodu ku socoto.
Marka la soo koobo, faa'iidooyinka isticmaalka DanAds kaabayaasha isxilqaan waxaa ka mid ah:
Qabashada heshiisyo miisaaniyadeed oo hooseeya
Hoos udhaca shaqada loogu talagalay daabacayaasha Hawlgallada Xayeysiinta iyo kooxaha Iibinta
Adeeg macaamiil degdeg ah 24/7
Hoos udhaca heerka macaamiisha
Khibrada macaamiisha oo la hagaajiyay
Waxay u oggolaaneysaa daabacayaasha inay la wareegaan qayb weyn oo ka mid ah keydkooda
Waxay u ogolaataa daabacayaasha inay ka faa'iidaystaan ​​xogta dhagaystayaasha xisbigooda koowaad
Si aad u noqoto mid gaar ah, DanAds wuxuu yareynayaa culeyska shaqo ee AdOps in kabadan 80% wuxuuna caawiyaa ladagaalanka caqabadaha sare ee soo galida ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe kuwa badana lasoo bandhigo markay raadinayaan inay ku xayeysiiyaan daabacaad gaar ah ama dhagaystayaal u gaar ah oo daabacan magac leh uu bixiyo.
Taariikh ahaan, qaar badan oo ka mid ah daabacayaasha waaweyn ayaa ku khasbanaaday inay diidaan heshiisyada miisaaniyada oo hooseeya sababo la xiriira xaqiiqda ah inay qaali tahay in la maareeyo amarrada marka la barbar dhigo dakhliga ay keensato. Xayeysiistayaasha yar yar ee doonaya inay kobciyaan ganacsiyadooda sidaas darteed waa la diiday kahor inta aysan xitaa helin fursad ay kula hadlaan iibiyaha.
Natiija ahaan, tani waxay ku qiimeysay ganacsiyo badan oo yar-yar iyo kuwa dhexdhexaad ah inay awood u yeeshaan inay galaan xayeysiinta khadka tooska ah ee ka baxsan xulashooyinka ay ka haystaan ​​shirkadaha tiknoolajiyada sida Google iyo Facebook. Adoo adeegsanaya xalalka is-adeegsiga sida DanAds, daabacayaashu waxay soo dhaweyn karaan qarash gareynta ka timaadda ganacsiyada yar-yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah welina way sii ahaanayaan kuwo faa'iido leh. Waxaan ka ognahay xogta aan gudaha ku hayno, in daabacayaasha isticmaalaya DanAds, kooxaha xayeysiiska Ops ay keydsadaan ilaa 85% culeyska shaqada halkii amar. Ujeeddadu maaha in la beddelo dadka wax iibiya, dabcan. Laakiin markan keydinta ayaa faa iidada u leh daabacaha maadaama shaqaalaha Ad Ops iyo Iibinta loo wareejin karo si ay diirada u saaraan howlaha dakhliga u kaxeeya sida kor u qaadista xisaabaadka waaweyn iyo hagaajinta ololeyaasha socda, halkii si fudud xog looga gelin lahaa, lambarada feeraha, iyo dirista warbixinnada.
Peo Persson, CPO, iyo aasaasaha shirkadda DanAds
Xayeysiinta iskaa wax u qabso waxay diiradda saareysaa dimoqraadiyeynta wixii muddo dheer ahaa silsilad aan daah-furnaan iyo xirid lahayn, furitaanka marinno dheeri ah oo dakhli loogu talagalay daabacayaasha dhaqanka, iyo in la hubiyo in dhammaan howlaha iyo xogta ay gacanta ku hayaan daabacaha, halkii ay ka ahaan lahaayeen dhinacyada saddexaad. Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay maaddaama adduunku si isa soo taraysa ugu beddelayo internetka. DanAds waxay u taagan tahay inay ka caawiso wadista isticmaalka otomaatiga goobaha xayeysiinta, hubinta in si weyn loo qaato amarada tooska ah ee dammaanadda leh ee daabacayaasha iyo, tan ugu muhiimsan, badbaadinta ganacsiyada iyo daabacayaasha waqti iyo lacag.
Wixii macluumaad dheeraad ah, kala xiriir DanAds
Tags: hawlgallada xayeysiintamadal xayeysiiskorsadomadal xayaysiintadanadsdiyaaradPeon Perssonbarnaamij xayeysiisdaabacayaashasanadkiixayeysiiska is-adeeggais-xayeysiinta is-adeeggaSoundCloudTripadvisorMacmiilka la soo saaraymadal xayeysiis cad-calaamadeysan
Peo waa istiraatiijiyad suuq geyn dijitaal ah oo asal ahaan ka soo jeeda la talin, ganacsi abuur. Kahor intaan la aasaasin DanAds sanadkii 2013, wuxuu qabtay doorar door sare ah oo ku saabsan warbaahinta iyo warshadaha IT-ga isagoo leh ku dhawaad ​​toban sano oo khibrad u leh ka shaqeynta hal-abuurnimada xayeysiiska. Peo wuxuu sidoo kale qayb ka ahaa kooxdii aasaastay Hybris Empire, warbaahin dijitaal ah iyo shirkad xayeysiin ah